मानिस किन दुःखी हुन्छ ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
मानिस किन दुःखी हुन्छ ?
समस्या त्यो अप्ठयारो परिस्थिति हो जसले व्यक्तिको जीवनमा असजिलोपना निम्त्याउँछ । त्यसकारण असल र सफल जीवन अस्तित्वको लागि हरेक व्यक्तिले समस्या समाधान अनिवार्य गर्नुपर्छ । समस्या समाधान गर्नु एक मानवीय कला हो । जुन व्यक्तिको उच्च सोंचमा निर्भर गर्छ र यस्तो सोंच उसको गहिरो तपस्याबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
व्यक्तिको जीवन रहुन्जेल कुनै न कुनै रूपमा समस्या आउँछ । जसलाई जीवनको पर्यायवाची पनि भन्न सकिन्छ । जीवन एक संघर्ष पनि हो । त्यसैले खुशी जीवनको लागि समस्याबाट भाग्ने होइन जुध्ने हो । समस्यालाई परास्त पार्ने हो र जसलाई सुवर्ण अवसरमा रुपान्तरण गर्ने हो । यसको लागि समस्याको पहिचान अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
व्यक्तिको व्यक्तिगत वा पेशागत जीवनमा आउन सक्ने समस्या मुख्यतः वास्तविक र काल्पनिक हुन्छन् । समस्या व्यक्तिको चाहना वा आवश्यकताले पनि सिर्जना गर्छ । जसलाई पहिचान गर्दै छुट्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा समस्याप्रतिको अस्पस्ट बुझाइ वा दृष्टिकोणले व्यक्ति जीवनभर दुःखी हुने र अरूलाई पनि दुःख दिने गर्दछ । त्यसैले समस्याको प्रमुख कारण के हो र कहाँ छ ? अनिवार्य निचोर्न सक्नुपर्छ ।
त्यो व्यक्ति जीवनमा धेरै दुःखी हुन्छ जो परिणाममुखी हुन्छ । वाह्य वस्तु, सम्बन्ध र पद प्रतिष्ठामा आफ्नो सुख सयल खोज्छ । यस्ता व्यक्तिको मनस्थिति वाह्य परिस्थितिको कारणले परिवर्तन भई रहन्छ र जीवनमा अनेकौं समस्याहरू आइरहन्छ । समस्या काल्पनिक हो कि वास्तविक छुट्याउन सक्दैन । समस्याहरूको भुमरीमा फँस्न पुग्छ । यसबेला उसको बुद्धि डराउँछ । मन शक्तिशाली हुन्छ । मनले सन्त्रास फैलाई रहन्छ । जसले गर्दा उसलाई अरु कसैले सहजै बहकाउन सक्छ र अरूको भनाइ कतै सही हो कि भनी सोच्न र मान्न बाध्य बनाउँछ ।
दुःखको प्रमुख कारण भनेकै बुझाइको नाममा हुने अस्पष्टता हो । जसले व्यक्तिको मानसिकतामा भ्रम सिर्जना गर्दै गलतलाई पनि सत्य हो भनी सावित गराउँदै स्वीकार गराउँछ । त्यसैले समस्याप्रति व्यक्ति स्पष्ट हुनुपर्छ । मनको कारणले उत्पन्न हुने कुनै पनि प्रकारको काल्पनिक समस्यालाई निःसर्त त्याग्नुपर्छ । आवश्यकताको प्राथमिकताको आधारमा उच्च तहको वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसको समाधानका उपायहरू रच्नुपर्छ ।
वास्तविक समस्यालाई व्यक्तिले जटिल समस्याको रूपमा होइन एक अस्थायी परिस्थिति हो भनी सोंच्नुपर्छ र चुनौतीको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । आफ्नो मनस्थिति स्पष्ट र दह्रो बनाउनुपर्छ । जानकारी होइन सम्बन्धित विषयको ज्ञान बढाउनुपर्छ । यस्तो प्रकारको सोंचले वुद्धि सक्रिय बनाउँछ । जसले व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउँदै संघर्ष गर्न आन्तरिक उर्जा र स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्दछ । वास्तविक समस्यालाई मनोरञ्जनात्मक ढंगले समाधान गर्नु नै जीवनको उद्देश्य हो भनी बुझ्नुपर्दछ ।
जस्तो कि कसैले करकाप गरयो भन्दैमा धुम्रपान, मद्यपान नगर्ने व्यक्तिले उनीहरूको आग्रह कदापि ग्रहण गर्दैन । त्यस्तैगरी हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा आउने समस्याप्रति आन्तरिक रुपले स्पष्ट हुनु नितान्त जरुरी छ । जीवनमा आउने समस्याको मुख्य दोषी आफूलाई देख्न सिक्नुपर्छ । अनि मात्र वास्तविक समस्यालाई चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्न र गतिलो योजना साथै निरन्तरको प्रयासमार्फत् चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।
(लेखकः धरानका निजी शिक्षालयका अध्यापक हुन्।)